.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Blog မှာ မောက် Cursor ထည့်ချင်ရင်
Blog မှာ မောက် Cursor ထည့်ချင်ရင်
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Blog မှာ မောက် Cursor ထည့်နည်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။သိပြီးသားလူတွေတော့ များမှာပါ။
ခုက မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ရိုးရိုးအတိုင်းက ပုံမှန်ဆို မြားပုံလေးဖြစ်ပြီး
လင့်ကို ထောက်လိုက်ရင် လက်ဝါးပုံလေးပေါ်ပါတယ်။အဲဒီ မောက် Cursor ၂ ခုကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေ ပြောင်းပြီး
သုံးချင်ရင်ပါ။ နမူနာကြည့်ချင်ရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာလည်း သုံးထားပါတယ်။ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီအောက်က ကုတ်ကို
အသုံးပြုရန် CSS ကုတ်
cursor: url(http://4.bp.blogspot.com/-Vq7qLbcR-PQ/UPuLNfeqq0I/AAAAAAAAAjQ/1ZbNjcTZt_Q/s1600/11317.png), default;}
cursor: url(http://1.bp.blogspot.com/-EU1YIV196OQ/UPuJ3acy7nI/AAAAAAAAAjA/lh44Doo5Ez4/s1600/005.png), pointer;}
ပုံကတော့ ကိုယ် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပုံလင့်ပြောင်းထည့်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ကျွန်တော် စုထားတဲ့ ပုံလေးတွေ
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံကို လင့်ထုတ်ပြီး ပြောင်းသုံးလိုက်ပါ။
အသည်းပုံလေးတွေ ဒေါင်းရန် ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပါ။
လက်ဝါးပုံလေးတွေလိုချင်ရင် ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပါ။
အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်...။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီကုတ်ကို CSS ကုတ် အလုပ်လုပ်တဲ့ ဘယ်ဆိုဒ်မှာ မဆို သုံးလို့ ရပါတယ်နော်..
သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ..
Posted by Thurainlin at 07:48